Shirkii uu Madaxweyne Farmaajo ugu baaqay madaxda goboladda oo dib-u-dhac ku yimid. – Madal Furan
Hoy > Warka > Shirkii uu Madaxweyne Farmaajo ugu baaqay madaxda goboladda oo dib-u-dhac ku yimid.
Shirkii uu Madaxweyne Farmaajo ugu baaqay madaxda goboladda oo dib-u-dhac ku yimid.
Editor September 17, 2018 Warka 0
Muqdisho (Madal Furan) – Waxaa muuqata inuu ku yimid dibudhac shirkii wadatashiga ahaa ee Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo uu ugu baaqay Hogaamiyayaasha Maamul Goboleedyada.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ay ka gaabisay in maamul goboleedyada ay kala hadasho tabashadooda, midaasina aanan loo baahneyn, waxaa hada socda dadaalo ay wadaan aqalka sare oo ay isugu soo dhaweynayaan dhinacyadan uu khilaafka ka dhaxeeyo.
Dhaqaalaha Soomalia wuxuu kor u kac sameeyey 2013-ka ilaa iyo 2017-ka
AKHRI:- Dacwad aan laga garniqin, Go’aamadii ka soo baxay shirkii Carabta ee Qaahira iyo arrinta Somaliya iyo Imaaraadka